IOS အတွက် | September 2019
ကျနော်တို့က iPhone မော်ဒယ်သင်ယူ
မကြာခဏလူတွေကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးသို့မဟုတ်ကြောင့်သူတို့ရတယ်မော်ဒယ်ဘယ်လိုသိရန်လိုချင်တာတွေရန်, Apple ကကနေဖုန်းကိုချေး။ ပြီးနောက်အားလုံး, ဒီအရည်အသွေးနှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ကင်မရာ, screen resolution ကို, etc, run နိုင်သည့် applications များပေါ်တွင်မူတည်သည် iPhone အတွက်မော်ဒယ်သငျသညျများ၏ရှေ့မှောက်၌မည်သို့မည်ပုံ iPhone ကိုလေ့လာပါကသင်သည်ကိုယ်အဘို့ဝယ်ကြဘူးလျှင်ပင်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။
ဘယ်ဟာပိုကောင်းဖြစ်ပါသည်: iPhone နှင့် Samsung က
ယနေ့စမတ်ဖုန်းလက်တွေ့ကျကျတစ်ခုချင်းစီကိုလူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အရာတစျခု၏မေးခွန်းကို သာ. ကောင်း၏နှင့်အရာပိုဆိုးသည်အမြဲအငြင်းပွားဖွယ်ရာတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ iPhone, Samsung က - ဤဆောင်းပါးထဲမှာအကြှနျုပျတို့နှစ်ခုအာဏာအရှိဆုံးနှင့်တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်များ၏ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ Apple ရဲ့ iPhone နဲ့ Samsung ရဲ့ Galaxy ယခုအားဖြင့်စမတ်ဖုန်းစျေးကွက်၏ထိပ်တန်းအဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစား။
IPhone ကိုမှ YouTube ကို
ယနေ့ YouTube ကိုအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်များအတွက်အပြည့်အဝအစားထိုးတီဗီဖြစ်လာသည့်ကမ္ဘာတွင် hosting လူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယို, ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေဘို့ - အမြဲတမ်းဝင်ငွေအဘို့တခုဖြစ်လာတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အသုံးပြုသူများသည်ယခု eponymous မိုဘိုင်း application ကိုမှတဆင့်အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများအကြိုက်ဆုံးဘလော့ဂါများကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
IPhone ကို - မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံနဲ့တစ်ဦးကိုမှန်ကန်အောင်မြင်မှုများဖြစ်လာသည်တဲ့ device ကို။ ဒါဟာ Apple ရဲ့အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေအရည်အသွေးမြင့်ပုံရိပ်တွေပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုံးစက်ကိရိယာများဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာအမြဲဖြစ်သည့်သာမန်စမတ်ဖုန်းမသာဖန်တီးနိုင်ကိုပြသနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်နီးပါးမည်သည့်ရုပ်ပုံနေဆဲတကယ်တော့ထဲမှာ, iPhone ပေါ်မှာစိုစွတ်သောခေါ်ဆောင်သွား - ကနောက်ထပ်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ, ငါတို့ကဒီဆောင်းပါးထဲမှာလုပ်ဖို့သွားကြသည်ဘယ်မှာခြုံငုံသုံးသပ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။
အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင် subscriptions ကိုကြည့်ရှုရန်ကဘယ်လို
App Store မှာဖြန့်ဝေလုနီးပါးမည်သည့်လျှောက်လွှာ, သငျသညျအခြို့ကာလအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းကဒ်အသုံးပြုသူနှင့်အတူပိုက်ဆံသတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေပမာဏကိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းလုပ်သည့်အခါပြည်တွင်းရေးဝယ်ယူ, ရှိပါတယ်။ သငျသညျအိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်သင်၏ကြေးပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်ရှာပါ။ ဤဆောင်းပါး၌ကြှနျုပျတို့သညျဤလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်မှာကြည့်ရှုမည်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ iPhone တိုက်ဆိုင်ညှိယူဖို့ကိုဘယ်လို
အန်းဒရွိုက်-devices တွေကိုသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနှင့်သင်၏ iPhone ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်မတူဘဲအထူးကစမတ်ဖုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သမျှဖြစ်လာရာမှတဆင့်ဆော့ဖ်ဝဲ, အဖြစ်တင်ပို့ခြင်းနှင့်သွင်းကုန်အကြောင်းအရာလိုအပ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့သည်သင်တို့နှစ်ဦးကိုလူကြိုက်များအစီအစဉ်များကို အသုံးပြု. သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အတူသင့်ရဲ့ iPhone တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။
Activation ပိတ်ဆို့ခြင်း - တစ်စက်ရုံတည်ဆောက်မှုကနေသင့်ရဲ့ smartphone ကိုကာကွယ်ပေးသည်တဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အများအားဖြင့်, ဒီ mode ကိုသငျသညျတတိယပါတီများထံမှသင့်ဖုန်းနှင့်အထဲတွင်သိမ်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြု, browser ကိုသို့မဟုတ်အခြား Apple ကကိရိယာမှတစ်ဆင့် enabled ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ: iPhone ကိုအောင်မြင်စွာပိုင်ရှင်မှပြန်လာသောပေမယ့်သော့ခတ်၏ activation နေဆဲဖြစ်သည်။
Apple ကအမြဲတမ်းကုမ္ပဏီစမတ်ဖုန်းအတွေ့အကြုံရှိသုံးစွဲသူများပေမယ့်နာရီကိုသူတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်မလိုချင်ကြဘူးသောသူသည်အသုံးပြုသူများမှအာရုံစူးစိုက်မှုမရသာပေးဆောင်ဘို့ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေအဖြစ်မိမိတို့၏ Device များစေရန်ကြိုးစားခဲ့လို့ပဲ။ သို့သော်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မေးခွန်းများကိုထမည်, ဤဿုံပုံမှန်ပါပဲ။
အဘယ်သူမျှမမက်ဆေ့ခ်ျက iPhone ထံသို့စေလွှတ်လျှင်အဘယ်အရာကို
အခြိနျမှနျမှ iPhone ကိုအသုံးပြုသူများက SMS ကို-မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်းအတွက်ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်, စည်းကမ်းအဖြစ်, အပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေဆိုလိုတာကနီအာမေဍိတ်အမှတ်အတူလာမယ့် icon ကိုမှပြသစာသား၏ဂီယာပြီးနောက်။ ကျနော်တို့ကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုနားလည်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် iPhone ကကျနော်တို့ကို SMS-မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်းသည့်အခါပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အဓိကအကြောင်းရင်းများ, များစာရင်းကိုဆွေးနွေးရန်မည်, အောက်တွင် SMS ကို-မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်းသည်မဟုတ်။
ယနေ့နီးပါးတိုင်း iPhone ကိုအသုံးပြုသူအနည်းဆုံး messenger ကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလျှောက်လွှာ၏လူကြိုက်အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက Viber ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်န်ဆောင်မှုကိုသူနိုင်အောင်ကျော်ကြားဖြစ်လာသည်သောအရာကိုအဘို့, ဤဆောင်းပါး၌ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ Viber ကို - တမန်, အသံသယ်ဆောင်ရန်အတွက်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုအသုံးပြုသည်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု, နှင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ။
IPhone ကို - သတိထားကုသမှုလိုအပ်သည်စျေးကြီး device ကို။ ကံမကောင်းစွာပဲအခြေအနေကကွဲပြားခြားနားတဲ့ဖြစ်, နှင့်အများဆုံးမနှစ်မြို့ဖွယ်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည် - စမတ်ဖုန်းရေကိုထိမှန်အခါ။ သငျသညျလျင်မြန်စွာပြုမူလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သင်တို့ကိုအစိုဓာတ်ကိုထိတွေ့ပြီးနောက်ပျက်စီးမှုကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။ အိုင်ဖုန်းအိုင်ဖုန်း7ခုနှစ်မှစ. ရေနှင့်ထိတွေ့လျှင်, လူကြိုက်များ Apple က-စမတ်ဖုန်းနောက်ဆုံးတော့အစိုဓာတ်ကိုမှအထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အိုင်ဖုန်းအပေါ်မျက်နှာပြင် Auto-လည်ပတ် disable လုပ်နည်း
IPhone အပါအဝင်မည်သည့်စမတ်ဖုန်း, built-in Screen ကိုအလိုအလျောက်လှည့်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကန့်လမ်းအတွက်ရနိုင်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ကျနော်တို့ဘယ်လိုက iPhone, သင်တိမ်းညွတ်၏အလိုအလျှောက်ပြောင်းလဲမှုကို disable နိုင်ပါတယ်စဉ်းစားနေကြသည်။ ပိတ်ခြင်း Auto-Rotate အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်အော်တိုလှည့် - သင်ကအလျားလိုက်အနေအထားတစ်ခုဒေါင်လိုက်ကနေစမတ်ဖုန်းကိုဖွင့်သည့်အခါမျက်နှာပြင်ကိုအလိုအလျောက်ပုံတူထံမှရှုခင်း mode ကို switch ထားတဲ့အတွက် function ကို။
အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင် LTE ကို / 3G ကို disable လုပ်နည်း
3G နှင့် LTE ကို - မြန်နှုန်းမြင့်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ရန်လက်လှမ်းခွင့်ရသောဒေတာထုတ်လွှင့်စံချိန်စံညွှန်းများ။ အချို့ကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသူဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်ကန့်သတ်ထားရန်လိုအပ်ပေမည်။ ငါတို့သည်ဒါကြောင့် iPhone ပေါ်မှာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်, ယနေ့ကြည့်နေကြသည်။ အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင် 3G / LTE ကိုပိတ်ခြင်းမြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာ transfer စံအသုံးပြုသူမှဖုန်း access ကိုကန့်သတ်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်လိုအပ်သောနှင့်အများဆုံး banal များထဲမှစေခြင်းငှါ - ဘက်ထရီပါဝါကိုကယ်ဖို့။
IPhone ကို - သင်ထိတွေ့နေဖို့ခွင့်ပြုမယ့်ပေါ်ပြူလာ device ကို။ မက်ဆေ့ခ်ျကိုအခြေအနေပြဘားတွင် "အဘယ်သူမျှမ Service ကို" "ကိုရှာဖွေခြင်း" သို့မဟုတ်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သင်, ဖုန်းဆက်ဖို့လာ SMS ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်ကိုရယူကြပါဘူး။ ဒီနေ့ဒီအခြေအနေကိုအတွက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါ။ iPhone အတွက်ကွန်ယက်ဖမ်းရန်စဲပြီဆိုရင်အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်မျှဆက်သွယ်မှုလည်းမရှိအဘယ်ကြောင့်သင်တို့ကိုဤကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေဘယ်အရာကိုနားလည်ရပေမည်။
IOS အတွက် VKontakte "မမြင်နိုင်သော" mode ကိုအတူ third-party client များ
VKontakte - နာမည်ကြီးလူမှုရေးကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများမွေ့လျော်သူ developer များပုံမှန်အစည်းအဝေးအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များမိတ်ဆက်ပေမယ့်တဦးတည်း - Off-line ကို mode ကို။ သို့သော်ကံကောင်းထောက်မစွာက iPhone ပိုင်ရှင်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကွန်ယက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးအလည်အပတ်များအတွက်အထူး applications များမှရယူသုံးပါ။ လူမှုရေးကွန်ရက်များ၏အခြားအသုံးပြုသူများ၏အရိပ်၌တည်နေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်သည့် VKontakte နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် Swest Feed အရည်အသွေးလျှောက်လွှာ။
အားကစားမှာကောင်းသော, သင် play နှင့်အနိုင်ရကိုချစ်? သင်တစ်ဦးသည် iPhone အသုံးပြုသူတွေဟာလျှင်, သင်တို့ကိုအမျိုးမျိုးသောအားကစားအပေါ်လောင်းကစားခွင့်ပြုအများအပြား applications များဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ လိဂ် 2009 ခုနှစ်ကတည်းကလိုင်စင်အကြီးဆုံးရုရှားဘွတ်ကုမ္ပဏီ Betting ။ အဆိုပါ iPhone အတွက်လိဂ်လောင်းကစားနောက်ဆက်တွဲသင်ဝန်ဆောင်မှု၏ဝဘ်ဗားရှင်းအဖြစ်အားလုံးနီးပါးတူညီ features တွေဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်: တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-ထုတ်လွှင့် (ဗီဒီယိုထောက်ခံမှုအပါအဝင်), အားကစားအာမခံအမျိုးမျိုးကို screen ပေါ်မှာဘုံဘိုင့်စုံတွဲတစ်တွဲ, အချက်များ၏လေ့လာမှုနဲ့ ပို။
တိုင်းသည် iPhone အသုံးပြုသူကွဲပြားခြားနားသော applications များများစွာနဲ့အလုပ်လုပ်နှင့်, သင်တန်း, သူတို့ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်မည်သို့မေးခွန်းပေါ်ပေါက်။ နေသည် ဒီနေ့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါ။ သူတို့တစ်တွေဟာ့ဒ်ဝဲဒြပ်စင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောကွောငျ့, အမူအရာ - အချို့မော်ဒယ်များပေါ်ရှိ "မူလစာမျက်နှာ" ခလုတ်ကို activated နှင့်အခြား (အသစ်) အပေါ်: ထို program ၏ပြီးပြည့်စုံသောပိတ်သိမ်း၏ iPhone ကိုမူအရပေါ်လျှောက်လွှာကိုပိတ်လိုက်ပါက iPhone ဗားရှင်းအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
အသုံးပြုသူများမကြာခဏကသူ့မိုဘိုင်းကိုခေါ်မှအမျိုးမျိုးသောသီချင်းတွေကိုသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်တေးသံများ install လုပ်ပါ။ iPhone အတွက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖုန်းမြည်သံကိုအလွယ်တကူကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိတဲ့တချို့အစီအစဉ်များမှတဆင့်ဖယ်ရှားပစ်သို့မဟုတ်အခြားပြောင်း။ ထိုကဲ့သို့သော iTunes နဲ့ iTools အဖြစ်သာကွန်ပျူတာနှင့် software နှင့်အတူခွင့်ပြုခဲ့တဲ့စာရင်းထဲက iPhone ကိုဖုန်းမြည်သံထံမှဖုန်းမြည်သံ Remove ဖယ်ရှားခြင်း။
ချိတ်တွဲ - သင်သည်အခြား devices များနှင့်အတူမိုဘိုင်းအင်တာနက်ကိုမျှဝေခွင့်ပြုကြောင်းအထူး iPhone ကိုအင်္ဂါရပ်။ ကံမကောင်းစွာအသုံးပြုသူများမကြာခဏမီနူးကို item ၏ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးများ၏ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမှာကြည့်ရှုမည်အောက်တွင်။ အဘယ်အရာကိုသင် iPhone ပေါ်မှာအင်တာနက်ကိုဖြန့်ဖြူးတဲ့ function ကိုသက်ဝင်နိုင်ဘို့က iPhone လံကြိုးဆုံးရှုံးခဲ့ရလျှင်လုပ်ဖို့သင့်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာများ၏သင့်လျော်သော setting များကိုရန်လုပ်ရပါမည်။
IPhone ကိုမှ iPhone ကိုမှဗီဒီယိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို